Milan na-alaghachi azụ na COVID-19
Location: Mbido » Ịdee » Na-agbasa News Travel » Milan na-alaghachi azụ na COVID-19
Milan - Foto © Elisabeth Lang
Oge kacha mma iji hụ Milan bụ oge ọkọchị. Okporo ụzọ ndị ahụ doro anya, autostrada nke si Switzerland Border Chiasso gaa Milan bụ ihe na-enye obi ụtọ, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọkwọ ụgbọ ala ọhịa dị ka ezumike, ezumike okporo ụzọ ndị obi ọjọọ na-agabiga, ebe ị na-adọba ụgbọala na Milan abụghịzi nsogbu , hotels dị ọnụ ala, ma nke kachasị mkpa, Milan dị - ma chebe - nchekwa.
Site na ire ere nke oge ọkọchị malite na Ọgọstụ 1, 2020, Milan ga-abụ ndekọ akaebe nke obodo ukwu na-edekọ obere oge ọkọchị Saldis (ire ahia) na-enye ego ruru 80%, na ndị na-azụ ahịa ga-enweta ahịa kachasị mma a hụrụ n'ime ọtụtụ iri afọ, ndị nọ n'ime na-ekwu.
Na ngụkọta mmechi nke ụlọ ahịa na-akụda oge opupu ihe ubi na ọkọchị ma hapụ ndị na-emepụta ihe na limbo, Milan na-agụta na mbuli elu nke azụmahịa na August.
N'ime La Galleria Emanuelle na Milan - Foto © Elisabeth Lang
Zụọ ahịa ruo mgbe i wedara
Fourlọ nkwari akụ anọ ahụ, nke bụbu ebe obibi ndị mọnk ma nwee ogige mara mma - ezigbo okomoko - dị na etiti obi onye mmebe Milan ma meghee ọnụ ụzọ ya nye ndị ọbịa na July 1. Ọ bụ na otu n'ime ụlọ nkwari akụ mbụ imeghe na Milan. Onye isi njikwa, Andrea Obertello, nwere obi ụtọ na mgbe ọtụtụ ọnwa nke imechi ụlọ nkwari akụ ahụ na-agba ọsọ na 20%, nke karịrị ihe Rome na-enwe ugbu a.
Ọ bụ nnọọ ejije malitere kpọmkwem n'etiti Milan si moda na ndị kasị adọrọ adọrọ ejiji na-egosi na February 23 mgbe nkwari akụ biri biri na mberede ida site 90% na efu na otu ụbọchị. Bbylọ nkwari akụ nke ụlọ nkwari akụ jupụtara na osisi, ọtụtụ akpa, na akpa ebe tagzi na-akwụ n'èzí n'okporo ụzọ dị warara nke Via Jesu iji weta ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ, ndị na-azụ ahịa, ndị ọbịa ejiji, na ndị na-ewu ewu na ọdụ ụgbọ elu, GM Andrea Obertello na-echeta. Ihe a niile mere naanị ụbọchị abụọ mgbe nke mbụ gachara COVID-19 ikpe pụta na Province nke Lodi, 60 m n'ebe ndịda nke Milan.
Milan Tourist Office mechiri - Foto © Elisabeth Lang
Wastali bụ obodo Europe mbụ nke coronavirus rikpuru. Mana dịka atụmanya nke mkpọchi ọzọ na-aga, mba ahụ agbachitere izere nlọghachi nke ọrịa. Nke a bụ n'ihi nlezianya nke ọma na nyocha kọntaktị, yana ọtụtụ ndị bi na ịdị uchu na-agbaso iwu nchekwa na ọtụtụ ndị na-ekpuchi ihe mkpuchi ihu n'èzí n'agbanyeghị na ọ bụghị iwu.
Na Mee 4, mgbe begantali malitere iwelata mmachi mkpọchi, ihe karịrị otu puku na narị abụọ ikpe ọhụrụ ka akọpụtara n'otu ụbọchị. Kemgbe ụbọchị Julaị 1,200, mmụba a na-enwe kwa ụbọchị adịchaghị agbanwe, na-eru elu nke 1 na July 306 wee daa na 23 na July 181. Somefọdụ ụyọkọ coronavirus nke pụtala n'ofe mba ahụ bụkarịrị n'ihi ọrịa ndị si mba ọzọ.
Ọnọdụ karịrị ókèala wastali bụ otu n'ime ihe kpatara Prime Minister nke ,tali, Giuseppe Conte, na Tuesday, gbasaa ọnọdụ mberede nke obodo ahụ ruo Ọktọba 15 n'agbanyeghị nnukwu ọdịda na ọnụọgụ ọrịa ahụ.
Kedu ihe ọ pụtara?
Mgbakwunye ọnwa 3 nke ọnọdụ mberede ruo October 15 bụ ihe a na-apụghị izere ezere kwuru Conte na Tuesday, n'ihi na nje a ka na ekusa. Lọ ndị omeiwu enyela ihe dị mma maka isi ihe maka ndị isi nyere ọtụtụ okwu gọọmentị na-ezube iji ike pụrụ iche dozie. Ndị a gụnyere iji ụgbọ mmiri iche ndị mba ọzọ iche, ịgbatịkwu ọrụ maka ndị ọrụ ọha na ndị nkịtị, imeghe ụlọ akwụkwọ, ịzụrụ ihe nchekwa na ihe iji hụ na mmeghe, ịhazi ntuli aka ime obodo na ntụgharị aka, yana iwu ọhụrụ maka nloghachi nke ndị fan na ama egwuregwu na Fans na-egwu.
Ejikwara ya bụ ngbochigharị nke ụgbọ elu si mba ndị a na-ewere dị ka nnukwu ihe egwu nke nje ahụ yana ọrụ ịkpọpụrụ iche - gụnyere ndị Italitali - maka ndị si na steeti ndị echere na ha nwere ihe egwu.
Mịnịsta ala Italy Giuseppe Conte n'oge arụmụka na Senate na Tuesday gbasara atụmatụ COVID-19. Foto - ANSA
Hastali amachiela ndị mbata si mba iri na isii e chere na ha nwere nnukwu ihe ọghọm, gụnyere Bangladesh, Brazil, Chile, Peru na Kuwait, ebe izu gara aga chọrọ ka ndị mmadụ si Romania na Bulgaria lọta kwụrụ iche maka ụbọchị iri na anọ. Iwu mkpuchi iche adịlarị maka ndị na-abụghị EU na mba ndị na-abụghị Schengen.
Ihe a niile nwere ike ịgbanwe na ọnụọgụ ọnụọgụ na Germany na Spain, dịka akwụkwọ akụkọ Italiantali na-akọ, na-eche na nke a nwere ike ịpụta na mba EU abụọ nwere ike ịbụ "focolaio" (hotspot) na-esote.
Ndị taketali anaghị eji ahụ ike ha egwu egwu. Enweghi ohere ịnweta mmadụ ịnọdụ ala n'akụkụ gị mgbe ị na-ebu ụgbọ njem ọha. - Foto © Elisabeth Lang
Bulgaria Covid-19 Germany Italy Milan Office Romania Rome
"Oghere" bụ isiokwu maka njem njem n'oké osimiri
NYC Top nke Rock Observation Deck re-emepe maka ọha na eze na August 6
IATO rịọrọ Prime Minister maka enyemaka na India…
Ọnwụnwa ụlọọgwụ ọhụrụ maka nnukwu Lymphoblastic nlọghachite...
International Consortium Iji Ọganihu Decarbonisation nke...
Mmụta njem nlegharị anya nwere egbe igwe: Fedor Shandor a...
Ahụmahụ n'ime ebe na-akpụzi ọdịnihu nke ụwa...